गोठालो खबर -३ २०७७ मङ्सिर १५, साेमबार,०७:२६:PM
काठमाडौं, १५ मंसिर। नयाँ शक्ति पार्टीले सरकारलाई जनताको सवालमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेको छ । पार्टीका केन्द्रिय संयोजक रवि किरण हमालले सोमबार एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको अकर्मण्यता, कुशासन र आसेपासे पुजीवादका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् ।
किरणले प्रश्न उठाउदै सरकार समस्या बाट भाग्न मिल्छ ? जनताको सर्वोच्च संस्था सांसदलाई बन्धक बनाउन मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । नयाँ शक्तिले तत्काल सांसद खोल्न , महामारीका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक प्याकेज ल्याउन र सुशासनको बन्दोबस्त गर्न आग्रह गरेको छ । "लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो, सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरौं " किरणले अपिल गरेका छन् ।